XOG: Sababta uu Madaxweyne Farmaajo kaga qeyb gali waayay ciyaarta Finalka Somalia oo la ogaaday | Codkagalmudug isha Laga Helo Wararka Xaqiiqda
Apr 29, 2018 - jawaab
Waxaan maanta la filayaa in Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ay ka ambabaxaan masuuliyiin ka tirsan dowlada federaalka Soomaaliya, si ay ugu qeyb galaan Ciyaarta ka dhacaysa Dalka Burundi ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Tanzania.
Wafuudaasi Waxaa horkacaya R/Wasaare ku xigeenka Dalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed, iyagoona dalka Tanzania u tagaya sidii loo dhiiri gelin lahaa Xulka da’yarta Soomaaliyeed ee ka yar 17 sano jiraka oo guul weyn u soo hooyay maantana Ciyaaraya kama dambeysa ciyaaraha Bariga iyo Bartamaha Afrika oo sanadkaan ay marti gilisay dalka Burundi.
Warar hoose oo ay heleyso Codkagalmudug ayaa sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ku han weynaa inuu ka qeyb galo ciyaartaasi Finalka oo Xulkeena ay ciyaarayaan isagoo doonayay inuu dhiiri galin iyo xamaasadeyn u sameeyo ciyaartoyda dalkeena.
Balse Madaxweynaha ayaa ka qeyb gali waayay Finalka ciyaartan maadaama dalka beri ay ka dhaceyso Doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee bedeli lahaa Prof. Jawaari oo xilkaasi iska casilay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuu doorashadaasi khudbad ka jeediyo, iyadoo sidoo kale Madaxtootada Soomaaliya ay ku jirto olole ay dooneyso inuu ku guuleysto musharaxa ay wadato.